မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: September 2008
' ဂျီတီစီ ' ဆရာများအဆောင်က
ဦး ဘာမုန့်ပါသေးလဲ တဲ့
ကျွန်တော့်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး နှုတ်ခွန်းဆက်သနေတဲ့
ထီး ကုဋေ ကဋာဖြစ်ပါစေသတည်း။
ကျမ ကဗျာတွေတင်ပါတယ်..။ဒီလိုတင်ရာမှာ ရည်ရွယ်ချက်သည်
တစ်ခုထဲပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါက ကျမခံစားမိတဲ့ကဗျာတွေကို ကျမရင်ထဲလေးနက်သလိုသူတကာတွေကိုလဲ
posted by mirror time 10:13 PM0comments
အုပ်စု ၃၊၄ ရွာအတွက် အဲ့ဒီတစ်ကျောင်းပဲရှိပါတယ်။ဆရာကလဲ တစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။
သူတစ်ယောက်ထဲက အတန်း ၅ တန်းကိုသင်ပေးခဲ့တာပါ။
၃ နှစ်ထဲက အမေကကျောင်းပို့တယ်၊မကောင်းကျောင်းပို့ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာပေါ့)
(ခုတော့ သူအိမ်ထောင်ကျသွားပါပြီ။ ဟိ ကြံနေခဲ့တာ.... မရလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်)
နွယ်လေးတဲ့..။သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးပါ။ကရင်နဲ့ ဗမာကပြားဆိုတော့ ဖြူဖြူလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတယ်။၁၀ တန်းနှစ်ထိ တတွဲတွဲရှိခဲ့တယ်။ခုတော့ သူစင်ကာပူရောက်နေပြီကြားတယ်။
သိပ်တော့မှတ်မိတော့ဝူးနော်၊ပြန်တွေးလို့ရသလောက်တော့ မင်္ဂလာမောင်မယ် အတွဲတွေဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်
ပထမဆုံး အလွတ်ရတဲ့ ကျောင်းစာ
က ကြီး၊ခ ခွေး၊ ဂ ငယ်၊ ဃ ကြီး၊ င
၈ တန်းရောက်တော့မှ ရိုက်ခံထိတာ၊ဇယ်ခပ်လို့တဲ့ ၊အမှန်တော့ ကျောင်းအားချိန်ခပ်တာပါပဲ၊
ဒါပေမယ့် ဆရာက ဘာလို့လဲမသိဘူး ဇယ်ခပ်တဲ့လူတွေ အကုန်လုံးကို အတန်းရှေ့မှာ တန်းစီပြီ
ခြေသလုံးကို ကြိမ်နဲ့ဆော်တာ (ခုပြန်တွေးရင်တောင် နာသလိုလိုပဲ)
အမေကတော့ တစ်ခါမှမရိုက်ခဲ့ဖူးဘူး။(အငယ်ဆုံးလေးမို့တဲ့ :P )
အိမ်မှာတော့ အဲ့နှစ်မှာပဲ အတန်းတင်ပထမရလို့ ကက်ဆက်တစ်လုံးဝယ်ပေးတယ်။
(ဒါပေနဲ့ ဖွင့်စရာအခွေမရှိလို့ ရေဒီယိုသီချင်းတွေနဲ့ပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်)
အဲ့ဒီ ပုသိမ်ကိုသွားတဲ့ ဒိုင်နာကားကြီးပေါ့။(အမြဲတမ်းက နွားလှည်းနဲ့ စက်ဘီးပဲ စီးနေရတာဆိုတော့ တကယ်ပျော်ခဲ့ရတာ)
အဖေက သမီးကို ကုန်းပိုးပြီး
ကျမ ၈ တန်းနှစ်မှာရေးထားတဲ့ကဗျာပါ။ကဗျာရယ်လို့ပြောလို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။
အဲ့ဒိတုန်းကတကယ်လဲကျမ အဖေ့ကိုတိမ်တွေထဲမှာ လိုက်ရှာနေခဲ့မိတယ်။
သူခုဘယ်ရောက်နေလဲ ကျမမသိပါ။မသေသေးရင်တော့ ပြန်တွေ့ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ။
ငါးသိုင်းချောင်းမှာဝယ်တာ ဆရာကောင်းသန့်ရဲ့ ၂၁ ရာစုအတွေးဆိုတဲ့စာအုပ်။ ၅၀၀ ပဲပေးရတယ်။
ခင်မောင်တိုးရဲ့ ပန်းချစ်သူ သီချင်းပါတဲ့အခွေနဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ မြင့်မိုရ်မို့လား သီချင်းပါတဲ့အခွေတွေ
(ခေါင်းစဉ်တွေတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး၊အဲ့ဒိ သီချင်းတွေတော့ အလွတ်ရခဲ့တယ်)
သေချာပြောပြပါ့မယ်။တောသားမြို့ရောက် ဖာလူဒါသောက်ဆိုသလိုမျိုး။အဲ ဟုတ်ပါဘူး။
ကျမအစ်ကိုငယ်နဲ့အတူ ရန်ကုန်ကိုလာခဲ့တာ။ကျမတို့မြို့ကနေ ကျမတက်တဲ့ကျောင်းကိုတက်တဲ့သူဆိုလို့
ကျမတစ်ယောက်ထဲရှိတယ်။ဆိုတော့ ကျမမှာ နေစရာရော၊ပေါင်းသင်းစရာရောသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ
ရှာရတာပေါ့။နှစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။နှစ်ယောက်လုံး ဟင်္သာတ မြို့ကပဲ။
သူတို့နဲ့ ၆ လလောက်တူတူနေခဲ့တယ်။ကျမတို့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ခမ်းနားကြီးကျယ်ပုံကို နောက်ကြုံတော့ ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပါဦးမယ်။
ချောင်းသာသွားကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူသွားဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့တာပါ။
မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုသူက အဲ့ဒီ Trip လေးတစ်ခုစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျမကျောင်းပြီးတော့မှ အလုပ်စလုပ်တာပါ။ ၁၉ နှစ်ကျော်ကျော်ရှိပြီပေါ့။
Australian တစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ company မှာ။Receptionist ပါ။ကျမကို daily wages worker အနေနဲ့ပဲထားပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ၂၀၀၀ ရပြီးတစ်ပတ်တစ်ခါပိုက်ဆံထုတ်ရပါတယ်။စုထားချင်လို့ မထုတ်ဘူးလုပ်လို့မရဘူး။
နောက်တော့ Assistant accountant ဆိုပြီးရာထူးတိုးပေးတယ်။
နေ့စားခကိုတော့ တိုးမပေးခဲ့ပါဘူး။ကျမအဲ့ဒိရုံးမှာ ၆လကျော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ အိမ်ကတူမလေးဆေးရုံတက်ရလို့လည်လည်ဝယ်ဝယ်လဲကိုယ်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီး အမေကထွက်ခိုင်းလို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
မာဘိုလို မန်သော်လိုက် (အလုပ်က အစ်ကို၊အစ်မတွေနဲ့ ကန်တော်ကြီးထဲမှာသောက်တာ....)
(မိန်းကလေးတွေလဲ သောက်တယ်နော် မယုံမရှိနဲ့)
ချောင်းသာမှာ၊တတိယနှစ်တုန်းက စာမေးပွဲပြီးတော့သွားကြရင်းသောက်ဖြစ်တာ။မူးလိုက်တာမှ။ လေကလဲတိုက်ကတိုက်နဲ့ဆိုတော့ချာချာလည်နေတာပဲသိတယ်။
ဟုတ်မှာ........!!! ဒီအတိုင်းအကောင်းဆိုတောင် စကားဒီလောက်များတာကို။
ကိုငြိမ်းစု (ဒုတိယက ကိုအောင်သာငယ်လေ)
အမေ့ကို 25000 ကန်တော့လိုက်တယ်။
အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်းငမွဲနှစ်ယောက်ကို လက်ဘက်ရည်လိုက်တိုက်တယ်။
ပထမဆုံး အကြိမ် ရန်ဖြစ်ခြင်း
ကျောင်းကားပေါ်မှာဖြစ်တာပါ။ယောက်ျားရှာကောင်မလေးက ကျမသူငယ်ချင်းနဲ့ ကျမကိုလာရစ်လို့။
စကားချပ်။ ။ အဲ့ဒါငယ်ငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာပါ၊ခုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှမော်တောင်မကြည့်ဝင့်ပါဘူး။
ထိုင်ခုံအောက်မှာ ဖိနပ်ကိုမှောက်ပြီးနင်းထားတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုး တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ထိပဲလုပ်ခဲ့တာ။
ပုသိမ်ဆေးရုံမှာ။နားခွဲရတာလေ။စရောက်ရောက်ခြင်းတုန်းက အမေနဲ့ကျမနဲ့နှစ်ယောက်ထဲရယ်။ကြောက်လိုက်တာလဲ အရမ်းပါပဲ။နှစ်ခါပြန်ပြီး ခွဲခဲ့ရတယ်။
ကျမအလုပ်မှာ ရွာသူ၊ရွာသား 200ကျော်လောက်ရှေ့မှာ စကားပြောရတုန်းက။
Tag တဲ့လူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျမလဲထပ်ပြီး tag လိုက်ပါတယ်
ခင်မင်ရပါသော ကိုငြိမ်းစု နဲ့ သယ်ရင်းကြီး ဘိုဘို
posted by mirror time 6:03 PM6comments
ဒါကိုပြန်တင်ချင်လို့ သူ့ဆီကခွင့်တောင်းရင်း ငယ်ငယ်ကကဗျာစာအုပ်ထုတ်လို့
ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့ warning ပေးခံရတာလေး ပြေးသတိရမိပါတယ်...။
posted by mirror time 6:28 PM2comments
စိမ်းလန်းစိုပြေ၊အင်းယားကန် နှင့် တိရိစ္ဆာန်ရုံသို့
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်စနေနေ့က၊မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း တူမလေးက အိပ်ယာလာနှိုးပါတယ်။
သူကခုမှ ၃ နှစ်တောင်မပြည့်သေးပေမယ့် သိပ်ကိုတတ်သိနားလည်နေပါပြီ။
ကျွန်မကို အိပ်ယာကူသိမ်းပေးရင်းက သူ့ကို " စိမ်းလန်းစိုပြေ " လိုက်ပို့ပါတဲ့၊လိုက်ပို့ပါဆိုတာထက်
သူက "အန်တီ..စိမ်းလန်းစိုပြေသွားကြမယ်လေ" တဲ့။တိုင်ပင်တဲ့လေသံနဲ့ပါ။ကျမလဲ အေးပါ အေးပါ ဟုတ်ပြီပေါ့။
အင်းယားနားမှာရှိပါတယ်။ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရဲ့ နောက်ဘက်ပေါ့။နေရာကောင်းကိုမှ ရထားတယ်ခေါ်မယ်နော်။
နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ပဲ သူတို့ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင် နယ်နိမိတ်ကို အစိမ်းရောင်မျိုးစုံနဲ့၊ အပင်တွေနဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ်။
ညဆိုခြံဝိုင်းကရှိသမျှအပင်တွေမှာ မီးရောင်စုံနဲ့။ထိန်လင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ခပ်မှိန်မှိန်နဲ့ လှတယ်ခေါ်ရမယ်ပေါ့လေ။
တစ်ခုရှိတာက အဲ့ဒိ artificial တွေကြောင့် သူ့နဲ့ကပ်နေတဲ့ အင်ယားရေပြင်ရယ်၊နောက် တိုက်တာအဆောက်အအုံတွေနဲ့
ကင်းကင်းရှင်းရှင်းမြင်ရမယ့်" ည "ရဲ့အလှတွေရယ်တော့ ဖုံးကွယ်သွားတာပေါ့လေ။
" စိမ်းလန်းစိုပြေ " ကိုရောက်နေခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။
အထဲကိုဝင်ဖို့ဝင်ကြေးကတင် ၂၀၀ ပေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာ ပျော့ပျော့အိအိကစားကွင်းရှိတယ်။
ဒါပေမယ့်မွေးထဲက အိမ်ထဲမှာပဲတစ်ယောက်ထဲနေ၊တစ်ယောက်ထဲပဲ ကစားလာခဲ့တဲ့ကျမတူမက အဲ့ဒီအပေါ်မှာ မကစားရဲဘူး။
သူ့ကိုဘယ်လိုမှ အဲ့ဒီပျော့ပျော့အိအိကစားကွင်းပေါ်ကို တင်ပေးလို့မရဘူး။တင်လိုက်တာနဲ့ ကြူကြူပါအောင် အော်ငိုပါလေရော။
စနေမို့လားတော့မသိဘူး။လူတွေ ပျားပန်းခတ်မျှ များနေတယ်။စိတ်ထဲတွေးမိသေးတယ်။ငါဒီနေ့လိုက်ပို့မိတာတော်သေးတယ်လို့။
စနေတောာင် ဒီလောက်ဆို တနင်္ဂနွေဆို ပိုဆိုးတော့မပေါ့။
ဒါနဲ့ပဲ စည်ကားလှတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီး ကျမအတွေးတွေနယ်ချဲ့မိတာပေါ့လေ။ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။
ဒီကလူတွေမှာလေ သွားစရာထွေထွေထူးထူးလဲမရှိတော့ မရှိမယ့်ရှိမယ့် ဒီနေရာလေးပဲ စုပြုံတိုးနေတာပါ။
အင်းယားကလဲ အရင်လိုသွားရလာရမကောင်းတော့ဘူးလေ။လတ်ဆတ်နူးညံ့တဲ့လေ၊ရေပြင်ကိုမြင်လိုက်ရလို့ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ခံစားမှု၊
ဒါတွေအစား ဗြူးဗြဲနဲ့ အော်ဟစ်သီချင်းဆိုသံ၊ဆေးလိပ်ငွေ့များ၊ဖြတ်လျှောက်နေတဲ့ခြေလှမ်းမှားပြီး ဟပ်ထိုးလဲကျမတက်ဖြစ်တဲ့အထိ
ဒီမှာကြုံလို့ သတိရတာလေးက ကျမတို့ရဲ့ဆရာကြီးတစ်ယောက်ပြောခဲ့ဖူးတာတွေ ပြေးသတိရမိတယ်။
ဆရာကခုဆို အသက်က 75 နှစ် လောက်ရှိတော့မပေါ့။သူက စာသင်တုန်းအခိုက်ဆို လွမ်းလွမ်းနဲ့နေမှာပေါ့လေ။
သူတို့ကျောင်းတက်တုန်းက ကျောင်းသားဘ၀ကို ပြန်ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
သူတို့ ဘယ်လိုစာသင်ခဲ့ရပုံ၊ဘယ်လိုကြိုးစားမှအောင်မြင်ပုံ၊သူတို့တွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြပုံ၊
တစ်ပတ်တစ်ခါ သူ့စာသင်ချိန်တိုင်း မရိုးနိုင်အောင်ကြားရတတ်တဲ့ ဆရာ့ကိုယ်တွေ့ပုံပြင်တွေပါ၊သူတို့တုန်းကဆိုရင်
အင်းယားက သစ်ပင်ပန်းမန်တွေနဲ့ အုံ့ဆိုင်းပြီးနေတာတဲ့။တက္ကသိုလ်ကနေ အင်းယားကိုသွားရတဲ့လမ်း၊အင်းယားကန်ဘောင်ပေါ်ကလမ်းတွေဟာ
ကျမတို့တွေလဲ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ရသလိုမျိုးနဲ့ အထပ်ထပ်ပြောလဲမရိုးနိုင်တဲ့ ဆရာတို့ခေတ်က အင်းယားကန်ရယ်၊တက္ကသိုလ်ရယ်၊အဓိပတိလမ်းရယ်....နဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
တွေ့ဖြစ်ရင်တော့ ဆရာ့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ခုကျမတို့မှာ သွားစရာနေရာတွေ ကျဉ်းမြောင်းလာခဲ့ပြီ။တစ်နေရာရာသွားပြီး တစ်ခုခုလုပ်ချင်ပဟေ့ဆိုရင် ထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေပေါများလွန်းလှပါတယ် လို့လေ။
ကာရာအိုကေဆိုင်မှာဆိုလဲ ၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ "ဖြေသိမ့်လိုက်" ကဖွင့်ပေးရဆုံးသီချင်းဖြစ်နေတယ်။တို့တွေဒီလိုပဲ သီချင်းတွေအော်ဆိုပြီး
တိရစ္ဆာန်ရုံဆိုတာကလဲ ကိုယ်ပါအဲ့ဒီအနံ့တွေကူးလာရတဲ့အထိ အနံ့အသက်က ပြင်းထန်နေတော့တာ။နောက်ဆုံးတော့ Relax လုပ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးနေရာလားလို့တောင် မေးစရာဖြစ်နေတယ်။လူတွေ ဒီနေရာတွေကိုသွားပြီးအပန်းဖြေ၊အနားယူနေကြတာ။
ဒီမှာ အရွယ်စုံ၊လူစုံဟာ စိတ်ညစ်၊စိတ်ဓာတ်ကျနေကျတာတွေကို ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ ဖြေဖျောက်နေကြတာပေါ့လေ။
ရင်နာစရာတွေတွေ့ရတယ်။လူတွေက ၀က်ဝံပေါက်စလေးကို ဖက်ဖက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေကြတာ၊
၀က်ဝံလေးခမျာတော့ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်ဖြစ်နေပြီ၊သူလဲအိပ်ချင်ရှာမပေါ့၊သူ့အမေကြီးလဲ သူ့လွမ်းနေတော့မပေါ့၊
လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားမရ၊စားမရတော့ စိတ်နဲ့ကိုယ် တသားထဲမကျ၊လိုအင်ဆန္ဒမပြည့်တော့
posted by mirror time 3:56 PM0comments
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဦးနှောက်ဆင်ခြင်မှုတွေနဲ့ဝေးရာ ခံစားမှုသက်သက်နဲ့
နာကျည်းမှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ပြန်မရနိုင်မှုတွေ ဒါတွေကိုပဲစဉ်းစားပြီး လုံးထွေးအဖေါ်ပြုခဲ့တာ
ကျမတို့တွေ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေရ၊သွားရလာရတာတွေရှိတယ်။
ရှောင်လွှဲလို့မရတာတွေ အများအပြားရှိကြတယ်။တည့်တည့်တိုးမှ အဆင်ပြေတာတွေ ရှိသလို
ရှောင်သွားမှ သင့့််တော်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ရှောင်မသွားလို့ တည့်တည့်တိုးရတာတွေလဲရှိသလို၊
မရှောင်တတ်လို့ တည့်တည့်တိုးတာမျိုးလဲရှိတာပေါ့။တည့်တည့်တိုးတဲ့အခါ အချီးမွမ်းခံရတာရှိသလို
အကဲ့ရဲ့ခံရတာတွေလဲ ကြုံခဲ့ဖူးကြမှာပါပဲလေ။ဒါကိုပဲ လောကဓံလို့သတ်မှတ်ရမလားလို့ ကျမစဉ်းစားမိပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ကိုယ်ပတ်သက်ချင်လှပါချည်ရဲ့ဆိုပြီး
တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်ဆံရတာတွေကို စိတ်ရှုတ်လာမိတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ယောက်ထဲနေ တစ်စိတ်ထဲထားပြီး လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကို ပြုံးပြုံးလေးလုပ်ပြီး
အကယ်လို့ကျမဘေးမှာရှိနေမယ့်သူတွေဟာ ခုရှိနေတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတွေသာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်..
ကျမဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်နေစရာမလို။တသီးတသန့် အေးဆေးသက်သာစွာ နှပ်နေရုံပဲ..။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုနေလို့မှ မရသေးတာ၊ဟုတ်တယ်မလား။
ခုပြောနေတာတွေကလဲ ကျမစိတ်ညစ်ညူးတဲ့အခိုက်မို့ ဒီစကားထွက်လာတာ။
ဒီအတွက် ကျမမှာ ဘာမှဖေါ်ပြစရာခံစားချက်မရှိတော့ပါ။
ကျမသူ့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကျော်ကျော်ထဲကပဲ။
သူလဲ သည်သို့ပဲ ထပ်တူရှိအံ့။သူလဲ ကျမကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်ထင်ပါတယ်။
posted by mirror time 3:54 PM0comments
အမှတ် ၂၁၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၀၆
posted by mirror time 3:52 PM0comments
ကဗျာဆိုတာ အလွမ်းရင့်မှ ရတတ်တာမျိုး။ ။
သေသေချာချာ သိမ်းဆည်းထားရရဲ့။ ။
အလွမ်းမသင့်တဲ့ အရိပ်မှာ မခိုလှုံချင်
ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းဟာ အသွင်သစ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ပြန်လည်ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ထဲမှာပါတဲ့ ကဗျာတွေအကုန်လုံးကိုလေးနက်စွာပဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခုပြန်ပြီးကျမစာမျက်နှာပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတာကလဲ အဝေးရောက်နေတဲ့အစ်ကို၊အစ်မ ကဗျာချစ်သူများပြန်လည်ခံစားနိုင်ရန် မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
posted by mirror time 3:51 PM0comments
တကယ်တော့ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်လိုစာမျိုးမှ မရေးဘဲ အိမ်ပြန်အိပ်နေတာ အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးပါ
ဒါပေမယ့် မပြန်ခင်လေးမှာ connection လဲ မဆိုသလောက်လေးကောင်းနေတုန်းမှာ
စိတ်ထဲပြောချင်တာလေးတွေ ရေးခဲ့ချင်ပါတယ်။စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လဲ မကပ်ပဲဖြစ်နေပါတယ်..ပြောချင်တာက ဒီလိုပါ။
ဆရာမ ဂျူး ရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေကို ကျမကြိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မှားတဲ့ အယူအဆတွေလဲ ပါနိုင်ပါတယ်။မှားတယ်ဆိုရင်တောင် စာတစ်ပုဒ်၊ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာ
ရေးနေရင်းမှာသာစာရေးသူက ပိုင်ပါတယ်တဲ့...၀တ္ထုအဖြစ်၊ကဗျာအဖြစ်ရောက်သွားပြီဆိုရင် ဒါကို စာဖတ်သူက ပိုင်ပါတယ်တဲ့။
(ကျမဆိုလိုရင်းမှာ ကော်ပီရိုက်လို့ ပြောတဲ့မူပိုင်ခွင့် ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သတ်ပါ)
ကိုယ့်ဘ၀ထဲ ထည့်ဆွဲယူတွေးနိုင်ခြင်း ဒါတွေကို ဆိုလိုတယ်လို့ ကျမနားလည်ထားပါတယ်။
ကျမ ဆရာမ ဂျူးစာတွေကို ကြိုက်ပါတယ်၊အထူးသဖြင့် ၀တ္ထုရှည်တွေကို ပိုလေးနက်လှပါတယ်။
သူသည်အရင်က စာပေနယ်ပယ်မှာ ဝေဖန်မှုမျိုးစုံကို ခါးစည်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့၊ဖြစ်ခဲ့ သူ့စာတွေကတော့ ကျမရဲ့ငယ်ချစ်တွေပါပဲ။ဆက်လဲချစ်နေဦးမှာပါပဲ။
ဂျူးဟာ သူ့ကို စာပေနယ်ပယ်က ဘာတွေဝိုင်းဝေဖန်လို့ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျမမသိပါဘူး။လက်လှမ်းလဲ မမှီခဲ့ပါဘူး။ သူ့ပထမဆုံးလက်ရာ"အမှတ်တရ" ဆိုရင် စာအုပ်သက်တမ်းက ကျမအသက်လောက်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျမသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ မသိချင်ပါ။ကျမစာတွေ စဖတ်ဖို့အားယူနေချိန်မှာပဲသူ့စာတွေ တလဟောထွက်လာပါတယ်။
တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေကြောင့်ရော၊ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်တာရော သူ့စာတွေက ကျမငယ်ချစ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ့ စာတွေကိုကျမကြိုက်တယ်၊ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတာကို ကျမဥာဏ်မှီသလောက်ခွဲခြားရမယ်ဆိုရင်
(၁)သူ့ဇာတ်ကောင်တွေသည် နလပိန်းတုံးတစ်ယောက်မှ မပါ ။ (ဘွဲ့တွေ ဒီဂရီတွေ လန်ပြန်နေအောင်တတ်တာကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။)
(၃)အဓိကကျမကြိုက်ရခြင်းအချက်မှာ မိန်းမဇာတ်ကောင်ဦးစားပေး ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
(မိန်းမတွေကို နှိမ့်ချသလို စကားလုံးတွေသုံးသည်။သို့သော် တစ်ဇာတ်လုံးအနေနှင့်ပြောရရင် ဘယ်တော့မှမိန်းမတွေ
သူ့ဝတ္ထုတွေထဲကတစ်ခုမှာ သူပြောထားသမျှစကားလုံးတွေထဲမှာ ကျမကြိုက်တဲ့၊သိပ်လဲမှန်ကန်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်
" မိန်းမဆိုတာ နှာခေါင်းမရှိရင် ချီးတောင်စားမှာတဲ့" ဒါက ဆရာမပြောတဲ့ မိန်းမဆိုတာပါ။
ကျွေးတဲ့သူကတော့ ယောက်ျားတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တဲ့ တခြားသူကျွေးတာမဟုတ်တန်ပါဘူး။ကျမဒီလိုထင်တယ်။
စဉ်းစားစရာတစ်ခုက မိန်းမတွေဘာလို့ဒီလိုလုပ်သလဲ ဆိုတာပါပဲ။
posted by mirror time 3:46 PM0comments
အတွေးဆိုတာ ဒီလိုပဲပေါ်တစ်ခါ ပျောက်တစ်လှည့်လား
ဖမ်းဆုတ်မရတဲ့ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း သဘောတရား
posted by mirror time 3:42 PM0comments
ကျမတို့ လူတွေသည် ချမ်းသာခြင်းကို ယေဘုယျကျကျပဲ သတ်မှတ်မယ်ဆို ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါသလဲ။
ဒီနေရာမှာ ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကို ပြန်လည်အနက်ဖွင့်ပြဖို့လိုလာပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ချမ်းသာခြင်းမှာမကြောင့်မကြ မတောင့်မတနေထိုင်ရခြင်းကို ဆိုလိုသည်ဟုသာ ကျမမှတ်ထင်ပါသည်။
ထပ်ပြီးပြောရရင် မကြောင့်မကြ၊မတောင့်မတ ဆိုတာကို ပြောချင်ပါသေးသည်။ဘ၀မှာ လိုချင်လှပြီဆိုသောအရာတစ်ခုကို ချက်ချင်းမဟုတ်ရင်တောင်တချိန်ချိန်မှာဖြင့်ရနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါကိုမကြောင့်မကြဟု ခေါ်နိုင်မည်ဟု ကျမထင်ပါသည်။
ဆိုပါတော့လေ…ချမ်းသာခြင်းကို လိုချင်တာရနိုင်သည်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု ပြည့်စုံကြွယ်ဝသည်။လုပ်တိုင်းဖြစ်သည်။
တွေးတိုင်းပေါက်မြောက်သည်။စိတ်ကူးတိုင်းလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်သည်။စသည်စသည်များကို ချမ်းသာခြင်း၏ ပြယုဒ်အဖြစ် ကျမတို့မှတ်ယူမည်ဆိုလျှင် ကျမယခုပြောမယ့် မိသားစုနှစ်ခုတွင်
ပထမမိသားစုကို "ချမ်းသာသောမိသားစု" သို့မဟုတ် "သူဌေးအိမ်" ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်မည်။
အကြောင်းမှာ ထိုအိမ်တွင် လင်မယားနှစ်ယောက်နှင့် ၂ နှစ်သားကလေးငယ်တစ်ဦးသာရှိသည်။
ပုံမှန် မိရိုးဖလာလယ်ယာလုပ်ငန်းအပြင် တခြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှန်သမျှ
သူတို့လင်မယား မပါတာမရှိသလောက်ဟုပြောရမည်။ထိုလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး အလွန်အလုပ်ကြိုးစားကြသည်။
သူတို့ ကြိုစားသမျှသည် သူတို့သားလေးအတွက်ဖြစ်သည်ဟုလဲ အမြဲပြောလေ့ရှိသည်။ကြိုးစားတိုင်းလဲ အောင်မြင်သည်။
လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုစတော့မည်ဆိုရင် ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအကြံပေးကြမည့်ဆွေမျိုးညာတိ တကယ်ပေါသည်။သူတို့အိမ်တွင် သာမာန်ကျေးရွာလေးပင် ဖြစ်လင့်ကစား လောကစည်းစိမ်ဟု လူအများသတ်မှတ်ကြသော လျှပ်စစ်မီတာ၊မီးအားနည်းလျှင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနှင့်နေနိုင်အောင်မီးအားမြှင့်စက်၊တီဗွီ၊ရေခဲသေတ္တာ၊အ၀တ်လျှော်စက်၊တယ်လီဖုန်း၊
သွားရေးလာရေးအတွက်ဆို မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဒါတွေရှိသည်။
ကျမတို့ ဒုတိယမိသားစုကို ဆက်ကြမည်။သူတို့မှာ လင်မယားသုံးယောက်ရှိသည်။
သို့သော် ပထမမိန်းမနှင့်သာ တစ်မိုးအောက်မှာအတူနေသည်။ဒုတိယအမျိုးသမီးကို ကျမတို့မသိသော
ဘယ်နေရာမှန်းမသိသည့် တစ်နေရာတွင် ထားထားသည်။
သို့သော် ထိုဒုတိယအမျိုးသမီးနှင့်ရသော ကလေး ၂ ယောက်ကိုကျတော့ သူတို့အိမ်တွင်ပဲအတူနေစေသည်။
ပထမ မိန်းမနှင့်ရတာကတစ်ယောက်ဆိုတော့ ပေါင်း ၃ ယောက်ကို ထိုယောက်ျားက ဆိုက်ကားနင်းပြီး ရှာဖွေကျွေးသည်။
မိန်းမ ဘာမှမလုပ်ရပါ။အိမ်တွင်းမှုလုပ် သိမ်းထုပ်သေချာရုံသာ။ကလေးတွေကလဲ ရှိတာနှင့်စားတတ်သည်။
ငါးပိချက်ကတော့ သူရို့ လက်ကတုံးတိုင်ပဲဖြစ်သည်။
ကလေးတွေ ဟင်းချေးများလို့ငိုသံ ဘယ်တုန်းကမှမကြားရစဖူးပါ။
သူတို့အိမ်မှာသိမ်းထားစရာ ဘာပစ္စည်းမှမရှိ။စုစုပေါင်း မိသားစုငါးယောက်ကို ရှိလှမှအလွန်ဆုံး
အ၀တ်အထည်အစုံ ၂၀ မကျော်နိုင်ပေ။သူတို့မှာ ချမ်းသာသမျှ ယောက်ျားလုပ်သူရဲ့ ဆိုက်ကားပဲ ဖြစ်သည်။
" ရှိပူရသေး ကုန်မှအေး " ဆိုတာမျိုးဖြစ်သည်။
ဒါတွေက ကျမမြင်သမျှ ၄င်းမိသားစု ၂စုကြားမှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားချက်များ ဖြစ်သည်။ဆက်ပြီး ကျန်တာတေလးတွေကို ပြောပြပါမည်။
ဆိုက်ကားသမားမိသားစုသည် ညတိုင်းလိုလို လမ်းထိပ်ကဗွီဒီယိုရုံမှာ ဗွီဒီယိုကားတွေညတိုင်း မလွတ်တမ်းသွားကြည့်ကြသည်။
အဲ့ဒီအချိန် သူဌေးယောက်ျားအလုပ်ကပြန်မလာသေးပါ။သူ့မိန်းမ... အိမ်မှာထမင်းမစားနိုင်သေးပဲ စိတ်ပူကာလည်ပင်းရှည်နေသည်။
သူတို့အိမ်က ခပ်ပြားပြားတီဗွီကြီးလဲ မဖွင့်တာကြာလို့ တစ်ခါတစ်ခါလိုင်းဖမ်းလို့ပင်မရနိုင်အောင်ရှိတတ်သည်။
ညည ဆိုက်ကားဆရာ လင်မယားမိသားစု အိပ်မောကျနေချိန်မှ သူတို့ထမင်းစားရတဲ့နပ်တွေရှိသည်။
ဆိုက်ကားဆရာ အိမ်မှာ ညနေပိုင်းဆို အကြွေးတောင်းသံတို့ ဆူညံနေတတ်သည်။
သို့သော် အိမ်သားတွေ တစ်ယောက်မှ မရှိကြပါ။သူတို့ ဗွီဒီယိုရုံရောက်နေကြလေပြီ။
သူဌေးကတော်ပေါက်စ ညနေရိုးရီတွင် အိမ်မကပ်နိုင်ပဲ ရွာရိုးကိုးပေါက် ကြွေးလိုက်တောင်းနေရသည်။
ဆိုက်ကားဆရာ မိန်းမသည် သူယောက်ျားကို ဒုတိယတစ်ယောက်နှင့် အူတိုရတာမောလှပြီ။
သူဌေးကတော်လဲ သူ့ယောက်ျားက သူ့ကိုဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်ချည်းဖိလုပ်နေသည့်အတွက် စိတ်တိုရင်မောလှပြီ။
ဆိုက်ကားဆရာသည် ညဘက်ကလေးတွေနှင့် ဆင်ကြီး ဂဠုံချီနေပြီ။
သူဌေးယောက်ျားသည် ဆိုင်ကယ်တဖုန်းဖုန်းနှင့် ခုမှ ပွဲရုံကပြန်ရောက်သည်။သူရောက်တော့ သူ့သားလေး အိပ်နှင့်ပြီ။
မနက်ဖြန် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကထိန်ပွဲရှိသည်။
အိုးပစ်အိမ်ပစ်ပြီး အလှူအတန်း၊မင်္ဂလာပွဲကို အစချီကနေ ပတ်စာခွာဖျာသိမ်း ဆိုက်ကားဆရာမိသားစုသွားနေသည်။
ထိုရက်မျိုးတွင် သူတို့အိမ်လဲ မီးခိုးတိတ်။ကလေးတွေလဲ ပျော်ကြသည်။သိပ်ကောင်းသော ဟင်းတွေစားရသည်။
သူဌေးလင်မယား အလုပ်မအားလို့ မျက်နှာပျက်ရသည့်ပွဲပေါင်း မနည်းတော့ပြီ။
ကလေးတို့ ဘာသာဘာဝ ချမ်းသာ၊ဆင်းရဲနားမလည်။သူများသွားရင် သွားချင်သော၊သူများဝတ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်ပြီး လမ်းထွက်ရင်
ထွက်ချင်သောသူတို့သားလေးငိုရသည်။မိဘများ စိတ်အခန့်မသင့်ရင် အရိုက်အမောင်းပါခံရတတ်သည်။
ဆိုက်ကားဆရာသည် တစ်ပတ်မှတစ်ခါ ရထားအမှီကုန်မှာတတ်သည့် အဒေါ်ကြီးကိုလိုက်ပို့ရသူဖြစ်သည်။မနက်စော ဘာမှမယ်မယ်ရရလုပ်စရာမရှိတတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် သူသည်သူ့ကလေးတွေနှင့် ထမင်းကြမ်းခဲ အိုးကင်းပူတိုက်ကို တူတူစားကြသည်။
သူဌေးယောက်ျားသည် ပွဲရုံကို မတ်ပဲတွေအ၀င်ရောက်မည်ဖြစ်လို့ ဝေလီဝေလင်းကပင် ဆိုင်ကယ်တဖုန်းဖုန်းနှင့် ထွက်သွားလိုက်လေပြီ။
ဘယ်သူ့ကို လူချမ်းသာဟု သတ်မှတ်ရပါမည်လဲ။ဘယ်သူ့ကို လူဆင်းရဲဟုသတ်မှတ်နိုင်မလဲ။
ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကို ဒီစာရေးပြီးချိန်မှာ ကျမဘယ်လိုမှ အနက် မဖွင့်တတ်တော့ပါ။ကျမတစ်ဦးထဲအမြင်သည် လူတွေသတ်မှတ်ထားသည့်
ချမ်းသာခြင်း ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တော့ တူနိုင်လိမ့်မည် မထင်ပေ။
posted by mirror time 3:41 PM0comments
ပြက္ခဒိန်မှာ အနီရောင်နဲ့ ပုံနှိပ်ထားတဲ့နေ့…။
ဒီကဗျာကို ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းမှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
posted by mirror time 3:39 PM0comments
(ခင်ဝမ်းကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည်၊၃၊၀၂၊၂၀၀၂)
ဆရာအောင်ဝေး၏ ခရမ်းနုရောင်နှင်း စာအုပ်မှ
posted by mirror time 3:36 PM0comments
လူသည် မနက်ထက် ညမှာ
ဆရာ ဖေမြင့် (စာဖတ်သမား၏ မှတ်စုများစာအုပ်မှ)
posted by mirror time 3:33 PM0comments
တွန့်လိပ်တက်နေတတ်တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အင်္ကျီဟာ ခုဆိုရင်ရောဘာတွေများပြောင်းလဲနေမလဲ..
ပြန်ပြီး စန့်နေမှာတော့ မဟုတ်လောက်သေးဘူး။
ခုနေခါဟာ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ..နှမ်းတွေ ကျဲလို့ပြီးချိန်ပေါ့၊ခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားညီမ မဆိုးရော...
ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုပဲ ထွန်တုံးကိုတဲ့ ခြေတော်တင်နေရတုန်းပဲမှုတ်လား...
ထွန်နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာ ယောက်ျားတွေအလုပ်မဟုတ်လားလို့၊အဲ့လိုပြောတိုင်းထွန်တုံးကိုင်တာ တစ်ရွာလုံးမှာကျုပ်တို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ပဲရှိတာတော့လို့ခင်ဗျား ဂုဏ်ယူနေဦးမလား...
သိပ်ထူးခြားတဲ့ ဒီနာမည်ကို ခင်ဗျားအဖေမှည့်ခဲ့တာလို့ ခင်ဗျားဂုဏ်ယူတတ်တာဟာ
ရိုးသားတဲ့ အညာသူမကြီးလို့ လှစ်ခနဲ၊လှစ်ခနဲ တွေ့ရတယ်..
ဖဲရိုက်တဲ့မောင်တွေကို အိမ်မှာ ဆီဦးထောပတ်အရံသင့် ကျွေးမွေးပြီး
ငရုတ်သီးဆားထောင်းဟာ ခင်ဗျားအတွက် အမြိန်ဆုံးဟင်းလျာတဲ့...ခင်ဗျားအဲ့လိုပဲ ပြောပြောနေတယ်
ပြန်ခါနီးလို့ ကျုပ်ကသံယောဇဉ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဖြတ်နေပါတယ်ဆိုကာမှဗျာ..
ဘာလို့ ခင်ဗျားက မျက်ရည်ကျရတာတုန်း...
ဘ၀ကိုအနိုင်ပိုင်းထားတဲ့သူက ဘာလို့ မျက်ရည်ကျရမှာတုန်း....
တစ်ခါတစ်ခါကျ ခင်ဗျားက ရာဇ၀င်တွေ ချီတက်သေးတာဗျ...နော်...
မနက်ဖြန် ရွာထိပ်က ဘုရားကိုလိုက်ပို့မယ်ဆို ဒီညဟာ ကျုပ်အတွက် ခင်ဗျားရဲ့ ရာဇ၀င်တွေနဲ့ အိပ်မက်မက်ရတဲ့ညပဲ...
ခင်ဗျားချီတဲ့ ရာဇ၀င်တွေကို ကျုပ်ခုထိလဲ အိပ်မက်မက်နေတုန်းပါပဲ...
မဟုတ်ရင်မခံတတ်ပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှခင်ဗျားဟာဘယ်လိုလူပါဆိုတာပြခွင့်မရခဲ့တာနှစ် ၃၀ ကျော်လာခဲ့ပြီ॥ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားကတော့ ဘ၀ကို ကျေနပ်ဆဲပဲ၊ဒါကြောင့်...
ခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားခု ဘယ်လိုနေနေ..ကျုပ်ရှိချိန်တုန်းကတော့ ကျုပ်ရှေ့ဆို လက်ကလေး ဆေးဆေးပြတတ်တဲ့ချစ်စရာ အညာသူမကြီး...
ဒီညနေဟာ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် နားရင်ရိုက်ချင်အောင်ဖြစ်ရတဲ့နေ့ပေါ့...
နောက်ကနေ ဖုန်တထောင်းထောင်းထဲမှာ ငှက်ပျောသီးတစ်ဖီးကိုင်ပြီးပြေးလိုက်လာတဲ့ ခင်ဗျားကို ကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်မေ့ရပါ့လဲ
တွေးရင်းလာခဲ့တာ... ငါ့အပြန်လမ်းခရီးကလဲ ခုထိမဆုံးသေးဘူး။
ရွာတံခါးက ပျက်ကျနေတဲ့ တိုင်တစ်တိုင်က ငါ့ကို သရော်နေတာလား
ဟေ့ အဲ့လိုမျိုးတော့ငါ့ကို မကြည့်နဲ့ကွ.. မခံနိုင်ဘူး ငါကငါတတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးပြီးရင်
ဘာကိုမှ ဆက်မတွေးချင်ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး၊ငါ့ကို အဲ့လိုမကြည့်နေနဲ့...လုံးဝမကြိုက်ဘူး
အဲ ဒါပေမယ့် တစ်ခုပဲ မှာခဲ့ချင်တယ် မင်းတို့ရွာကို ငါပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်...
ဒီတစ်ခါတော့ ကျမကြိုက်တဲ့ စာတွေထဲက ခုနေခါနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။ဖတ်ပြီးလို့ သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ ကွန်မန့်လေးပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ကျနော် အရပ်မရှည်ပါ။ကျနော့်အင်္ကျီကော်လံကတော့ ရှည်ပါသည်။
ကျနော်ကြိုက်သော ကောင်မလေးကလည်း ရှည်ပါသည်။(သူမအရပ်အမောင်းကိုမှီရန် သို့မဟုတ် မီသည်ဟုအထင်ရောက်စေရန် ကျနော်သည်ခွာလေးလက်မခန့်မြင့်သော
ဟိုက်ဟီးရှူးဖိနပ်ကို သူမနှင့်ဆုံရန်ရှိတိုင်း ဂရုပြုကာ စီးလေ့ရှိပါသည်။)
ကျနော့်ရည်းစားစာကလည်းရှည်ပါသည်။သို့သော် ကျနော်၏ တစ်ဖက်သတ်အချစ်ဇာတ်လမ်းကတော့ မရှည်ပါ။ကောင်မလေးသည်
သူမ၏ချစ်သူ(ကျနော့်ထက်ရော သူမထက်ပါ အရပ်ပိုရှည်သောငနဲ)နှင့် လက်ဆက်သွားပါသည်။သူတို့၏ အိမ်ထောင်ရေးသက် ရှည်မရှည် ကျနော်မသိပါးကျနော့်အလွမ်းတွေ ရှည်နေခဲ့သည်မှာ
နောက်ထပ်ချစ်စရာကောင်းသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့်ကျနော်တွေ့ဆုံခွင့်ရသည့် အချိန်ထိဖြစ်လေသည်။
ကျနော့်ခြေထောက်တွေလဲ ရှည်ပါသည်။(လမ်းများခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ကျနော့်အဖေကတော့ အလည်လွန်နေလျှင် ကျနော်ကိုယ်တာထမင်း၊ဟင်းများကို နောက်ဖေးလမ်းကြားသို့
လွှင့်ပစ်လိုက်ပါသည်။သတ်မှတ်ချိန်ထင် နောက်ကျပြန်လာလျှင်(သူ့သတ်မှတ်ချိန်မှာ ည ကိုးနာရီဖြစ်ပါသည်။)တံခါးဝတွင် ကြိမ်လုံးနှင့်စောင့်ကြိုနေတတ်သည်။သို့မဟုတ် တံခါးဖွင့်မပေးဘဲ ထားကာ
အိမ်အပြင်တွင် အိပ်စက်စေသည်။သူ့အပြစ်ပေးမှုများမှာ ကျနော့်အတွက် ထူးခြားထိရောက်မှုမရှိပါ။သူက ကျနော့်ဆံပင်ရှည်သည်ကိုကြည့်မရ။အတန်းတစ်တန်းတွင် နှစ်အရှည်ကြီးနေတာကို မနှစ်မြို့။(ကိုးတန်းတွင် ၅ နှစ်နှင့် ဆယ်တန်းတွင် ၅ နှစ်နေထိုင်ခဲ့သည်။)
ကျနော့်ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်များမှာ ကဗျာအကြမ်းများနှင့် ပြည့်ကျပ်ထူပိန်းနေသည်။ကျနော် မိုးရေထဲတွင် လမ်းအရှည်ကြီးလျှောက်ခဲ့သည်။
ထိုလမ်းသည် အဖေလျှောက်စေချင်သော လမ်းမဟုတ်။သူနှင့်ကျနော့် ကြားမှ အဆင်ပြေမှုများသည် သူကွယ်လွန်သည့် အချိန်ထိ ရှည်လျားနေခဲ့သည်။
ဘီတဲလ်တို့လည်းဆံပင်ရှည်ကြသည်။ရိုလင်းစတုန်းတို့လည်း ဆံပင်ရှည်ကြသည်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူငယ်များလည်းဆံပင်ရှည်ကြသည်။
ကျနော်တို့ (ဆံပင်ရှည်များ) မိန်းမနှင့် ကလေးများက ကြောက်လန့်ကြပြီး ဆံပင်တိုသော ယောက်ျားများက ရွံ့မုန်းခဲ့ကြသည်။
လမ်းသရဲဟု အမည်တပ်ကြသည်။ကျနော်တို့သည် စတီရီယိုဟုခေါ်သော သီချင်းများကို ဆိုကြသည်။လမ်းမများပေါ်တွင် ရန်ဖြစ်ကြသည်။
အိမ်တွင် မပျော်ပိုက်ကြ။ပုန်ကန်သူများဖြစ်ကြသည်။ဘုရားမရှိခိုးသူများဖြစ်ကြသည်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှုကို ထူထောင်သူများဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ဂျင်းဘောင်းဘီဝယ်ရန် အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။ကျနော်အသက်သည် ၂၀ ကျော်ဖြစ်သည်။တိုက်ပုံဝတ်သူများကို စစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
လပေါ်ကို လူတို့ခြေချခဲ့ကြသည်။မာက်စ်ဝါဒသည် မျိုးဆက်သစ်တို့ ဖက်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်၏တန်ဖိုးမှာ တစ်မက်ဖြစ်သည်။
အိုင်စတိုင်း၏ ရီလီတီးဗစ်တီ သီအိုရီကို ကြားခဲ့ဖူးသည်။(နားမလည်ပါ။) အင်းယားကန်ထဲတွင် ရေကူးခဲ့ကြသည်။
သမ္မတကနေဒီ သေနတ်ဖြင့် အပစ်ခံရသည်။ကက်သရင်းဒညုကို လက်ထက်ချင်နေခဲ့သည်။ကျနော့်တွင် တက်ထရွန်အင်္ကျီနှစ်ထည်ရှိနေခဲ့သည်။
ကျနော့်ကို ကျနော် အရေးပါသောသူဟု ထင်နေခဲ့သည်။ပန်းချီကို ဆရာမရှိဘဲ ရေးနေခဲ့သည်။ဟောလီးဝုဒ်ကားများရုံတင်သည့် ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်
အချိန်ကုန်နေခဲ့သည်။ဘော်ဘီဖစ်ရှား၏ စစ်တုရင်အကွက်များကို လေ့လာနေခဲ့သည်။ချီဂွေဗားရား အတ္ထုပတ္တိကို ငါးခါပြန်ဖတ်နေခဲ့သည်။
ဘရစ်တနီစပီယား နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ကို မမွေးသေးပါ။စကြ၀ဠာ နှင့် အချိန်၏ အစ(မဟာပေါက်ကွဲမှု)ကိုရှာဖွေမတွေ့သေးပါ။ဘာလင်တံတိုင်းကြီးကို
မဖြိုဖျက်ရသေးပါ။ရုပ်မြင်သံကြား မကြည့်ဖူးသေးပါ။အိုဇုန်းလွှာလည်း မပေါက်ပြဲသေးပါ။မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရား ပျံလွန်တော်မမူသေးပါ။
ကျနော် စာကြည့်မျက်မှန် အသုံးမပြုသေးပါ။ သန်လျင် နှင့် ရန်ကုန်ကို တံတားမထိုးရသေးပါ။
posted by mirror time 3:20 PM2comments
ညဉ့်အိပ် ညဉ့်နေကြယ်များကို ကြည့်ငေးရင်း
posted by mirror time 3:19 PM0comments
posted by mirror time 3:12 PM0comments
"ဟေ့ ခဏ နေဦးလေ "
သူတို့ နှစ်ယောက်က ကြားမကြားတော့မသိဘူး
ဘေးက ဖြတ်သွားတဲ့ကောင်လေး နှစ်ယောက်ရဲ့ အသံက နားထဲကိုကန့်လန့်ဝင်လာပါတယ်
"သြော် ခဏမဟုတ်ပါဘူးကွယ် အကြာကြီးစောင့်ဆိုလဲ ဖြစ်ပါတယ်"
ဒါက ကျမ ကြားလိုက်သမျှသာ... နောက် မကြားတာတွေ ရှိသေးတယ်..
မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေး ခံရခက်ခက်ဖြစ်သွားပါတယ်
ကျမ သူငယ်ချင်းတွေကအမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်...နဲနဲတော့ ရိုင်းပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ကျမတွေးတာက ကျမတို့ဆီမှာက အဲ့ဒါမျိုးတွေပဲ ပိုပိုများလာသလိုပါပဲ...
နေရာ အကန့်အသတ်မရှိ.. အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ..
စော်ကားမယ်ဆိုရင်တောင် ကာလံဒေသံ ရွေးပြီးမလုပ်သင့်ဘူးလားကွယ်.
ဆိုပါတော့ ကျမက ည ၁၁ နာရီမှာ အပြင်ထွက်တယ်.. မလုံ့တလုံဝတ်ထားတယ်
ဒါတောင် ကျမကိုယ်တိုင် တစ်စုံတစ်ခုသော လူတန်းစားတစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်လိုက်ရာ ရောက်သွားပြီ...
(လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရှိသင့်တယ်ဆိုတာကို ကျမ လက်ခံပါတယ်
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်မှုကကျတော့ သူတပါးရဲ့ အရှက်သိက္ခာကိုပါ ထိခိုက်လာပြီ မဟုတ်ဘူးလား)
ထားပါတော့လေ အဲ့ဒါမျိုးဆို ပြောပါ.. စပြီးလမ်းထွက်တယ်ဆိုထဲက ကျမရဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါကို ပြင်ဆင်သွားမယ်..
ဒါတွေကို ကျမ ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်၊ကြားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်.. ဟုတ်တယ်မလား
ခုဟာက ညနေပဲရှိသေးတယ် ပြီးတော့ အင်မတန်မှ လူရှုပ်တဲ့ လမ်းမပေါ်ကြီးမှာ...
ကျမတို့ မိန်းကလေးတွေမှာ ဘာမှပြန်လည်ချေပခွင့်မရှိပါဘူး...
အံမယ် သူတို့က ပြောပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်မှ အင်မတန်ရွံစရာကောင်းတဲ့ အကြည့်နဲ့ လည်ပြန်ငဲ့ကြည့်သေးတာရှင့်
ဘယ်လောက်များအောက်တန်းကျတဲ့ အပြုအမူများလဲကွယ်..တော်တော်လည်း ရွံစရာကောင်းပါတယ်
ကျမတစ်ဆက်တည်းတွေးဖြစ်တာတွေ အများကြီးပါပဲ ကျမအပြောခံရလို့မှ မဟုတ်ပါဘူး
ကျမလိုမျိုး တနေ့တနေ့ မိန်းကလေးတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များ စိတ်တို ဒေါသထွက်ဖြစ်နေရသလဲ
တခါတလေဆို ပြောဆိုသွားတဲ့အထဲမှာကိုယ်လိုပဲ မိန်းကလေးတွေ ပါနေသေးတယ်
အလိုလေး မြတ်စွာဘုရား..ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ မသိတော့ပါဘူး...
မိန်းကလေးတွေကလဲ " ဟဲ့ " လို့ တစ်ခွန်းမအော်ပါဘူး
ဒါဆို သူတို့အတွက်တော့ ဒီလို ကိစ္စဟာ သာမာန်အဖြစ်အပျက်ပဲများလား
ခုခေတ်က ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကို မသိပါဘူး...အားလုံးက ရိုင်းလိုက်ဖို့ကို ၀န်မလေးပါဘူး..
ကျမ အယူအဆတစ်ခုရှိပါတယ်...ဘယ်သူတွေက ဘာတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေနေ ကိုယ်က သူများဖန်တီးဖို့ ရွံ့ရုပ်မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖန်တီးမှာပေါ့ ကျမဆိုလိုချင်တာက ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ပိုင်ရမယ်..
အနဲဆုံးဘာမှ မပိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုယ်ပိုင်ရမယ်
ခုတော့ သူတို့များမှာတော့ ဖျက်ချင်တိုင်းဖျက်ဆီးတာကို အဖျက်ဆီးခံနေကြတယ်
လူတွေဟာ အစွန်အဖျားကိုအမိအရ ဖမ်းဆုပ်ပါတယ် တကယ် လက်လှမ်းမှီအောင် ပြေးလိုက်တတ်တယ်...
မမှီရင် မှီတာလေး ပြေးဆွဲကြတယ် ဘာကိုမှ လက်လွတ်မခံပါ...
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘာကိုမှ လက်လွတ်မခံပါဘူး..
ဒါပေမယ့် သူတို့မေ့ထားကြတယ် မေ့ထားကြတဲ့အရာတွေ အများကြီးပါပဲ
ကျမ ဥာဏ်မှီသလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ခုကျမတို့ ခံစားနေရတာတွေဟာ ခေတ်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေပါပဲ..
ပေးသလောက်ကိုပဲ ယူတတ်ပြီး ဖျောက်ထားတာကို မရှာဖွေချင်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့
စော်ကားမှု မှန်သမျှကို ကျမတို့တွေ ခါးစည်းခံစားနေ၇တာပါပဲ...တော်တော်လေးရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ကျမသိပါတယ် ခုလဲ ကျမစာတွေကိုလာဖတ်တဲ့သူတွေက ကျမထက်အရာရာ ပိုပြီးပြည့်စုံကြမှာပါ...ကျမပြောနေတာတွေကိုလဲ သိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါ
ဒါပေမယ့် ကျမဒီအကြောင်းကို အားလုံးပြန်လည်အမှတ်ရအောင် ရေးလိုက်ရပါတယ်..
နောက်ဆုံးတော့ ဒါက ကျမရဲ့ မရင့်ကျက်မှုတွေလို့ပဲ သတ်မှတ်ရပါတော့မယ်...
posted by mirror time 3:05 PM0comments
ကျမ ဘလောဂ့်ရေးနေတဲ့အကြောင်းညတုန်းကစဉ်းစားမိတယ်.သို့သော် သူတကာလိုတော့ ဖွင့်လျက်သား ကိုယ်စာမျက်နှာလေးရှေ့ဝယ် ထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေရခြင်းမျိုးတော့ မဟုတ်ရပါ..သတိထားမိတာ တစ်ခုက ကျမစာတွေဟာ သရော်စာလဲ မဟုတ် ...အပျော်ဖတ်လဲ မဟုတ်...ရသလဲ မဟုတ်..ပညာရပ်ဆိုင်ရာလဲ မဟုတ်... ဒါဆိုဘာများဟုတ်တာရှိသေးလဲ...
တကယ်တော့ စာပေရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ရင် စာဖတ်ရုံသက်သက်က လွဲပြီး တခြားဘာမှ မသိ၊မတတ်ပါဘူး...
စာပေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဆိုတာ ပိုဝေးရောပေါ့.. သူများစာကို မဆိုထားနှင့်။ ကိုယ့်စာကိုပဲ ဘာတွေပေါလိမ့်လို့ ပြန်တွေးရတဲ့ အခြေအနေဆိုတော့ ဒီစာရေးတဲ့သူရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
အရင်ဆုံးသရော်စာဆိုတာ ဘာတွေပါလိမ့်လို့တွေးမိတယ်..အဖြေကတော့ သိသလိုမသိသလိုပါပဲ
နောက်..အပျော်ဖတ်..ဒါလဲ ဘာတွေလဲဆိုတာ ရေးရေးတော့ မြင်သလိုလိုပဲ..
နောက် ရသ ..ဒါကတော့ ဝေးပေ့ါ..ဘယ့်နှယ့်မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး....
နောက်ဆုံး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ..အထူးသဖြင့် ခုလုပ်နေတဲ့ ဘလောဂ့်ဂင်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ငါဘာများတတ်တာရှိလဲ လို့စဉ်းစားမိတယ်...
ဘာမှ မသိပါဘူး သူများပေးတဲ့ တမ်းပလိတ်နဲ့ သူများလင့်ခ်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့..ဘာမှ မတတ်....... :)
ဒါဆိုဘာကြောင့်များ ကျမစာတွေရေးနေတာလဲ..စာတွေလို့တောင် အမည်တပ်လို့မရတန်ဘူးထင်ပါရဲ့..
ဆရာမ ဂျုးရေးတဲ့ "ကျမ ဖတ်ဖူးသော စာအုပ်များ" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရဲ့နောက်က စာတစ်ပိုဒ်ကို ပြေးသတိရမိတယ်..
သူငယ်စဉ်က စာရေးဖို့ စဉ်းစာတိုင်း ဖြစ်တတ်လေ့ရှိတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုပြောတာလို့ ထင်မှတ်ရပါတယ်...သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး....အကြမ်ဖျင်းပြောရရင် ရေးရမှာ မ၀ံ့တဲ့စိတ်..ဆရာ့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိမ်ငယ်တဲ့စိတ်၊ ငါ့စာတွေက အဆင့်အတန်းမှမှီရဲ့လား..စသည်ဖြင့်ပေါ့ ..ဒါက သူငယ်စဉ်အခါတုန်းကပါ..ခုချိန်မှာတော့ ဆရာမဂျုးက မြန်မာပြည်ရဲ့ Best Seller စာရင်းဝင်တစ်ယောက်ပါ...ဒါကိုဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး..
ကျမလဲ ခုအဲ့လိုပါပဲ..ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ၊ကိုယ့်ဖန်တီးချင်တာလေးတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကို တွေးမိတဲ့အတိုင်းရေးနေမိတာပါပဲ..
ဒါကိုမှ လာဖတ်တဲ့ သူတွေရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရတော့ ဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ကို.. ကျေနပ်နေမိတာပါ(မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး ရောက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်..)
အဆုံးသတ်ပါတော့မယ်.. ရေးချင်ရာလျှောက်ရေးနေတာလဲ တော်တော်ကိုရှည်လာခဲ့ပြီ..
ညတုန်းက မမြင်ရဘဲ စဉ်းစားတုန်းကလိုပဲ ခုမနက် သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်တော့မှ ကျမစာတွေဟာ "အငေါ့တူး" စာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပိုသေချာသွားတော့တယ်... တော်တော်လေးလဲ နင့်နေအောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်.. ခေတ်သစ်စာပေတစ်ခုလို့ပဲ ကိုယ့်ဘာသာကို အမည်တပ်ပြီးနေလိုက်ပါတော့တယ်....
ကျမစိတ်တွေဟာ.. ခုချိန်မှာ ပြောချင်တာမပြောရ..လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရ...နေချင်သလိုမနေရ..သွားချင်သလို မသွားရ..
ဒီ အတ္တစိတ်တွေနဲ့ လှောင်ပိတ်ပြီး..ဘယ်သူ့ကို ငေါ့နေမှန်းမသိတော့ပါဘူး....
posted by mirror time 2:54 PM0comments
မြေနီကုန်းကနေ လှည်းတန်းကို အသွား...ပြည်လမ်းမပေါ်မှာ.....
မြေနီကုန်း ဒဂုံစင်တာဘေးကနေ စပြီး လှည်းတန်းရောက်တဲ့အထိပဲလို့ဆိုရမယ်॥ကားက ဘီးတစ်လိမ့်ချင်းပဲ သွားနေရတယ်.....ကားနောက်လိုက်နဲ့ ကားဆရာ ရဲ့ ဆဲသံ အော်သံတွေကြားမှာ ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေကတော့ ဘာမှစိတ်ခံစားမှု မရှိသလို...တနည်းပြောရရင် သည်းခံနိုင်စွမ်းအားကို ပါရမီဖြည့်ကျင့်နေကြပုံပါပဲ॥အဲ့ဒီထဲမှာ ကျမလဲ ပါတယ်...
မြေနီကုန်းကနေ ဟံသာဝတီ အ၀ိုင်းထိ ပိတ်လိုက်တဲ့ ပိတ်လိုက်တဲ့ကားတွေ...မနည်းမနောပဲ
ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းမှာ "အ၀ိုင်းပတ်ယာဉ် ဦးစားပေးပါ " ........ ဒီလိုမျိုးရေးမထားပေမယ့် ကားဆရာများခမျာ လှည်းတန်းဘက်က တက်လာတဲ့ ကားတန်းကြီးကို စိတ်မရှည်စွာနဲ့ပဲ စောင့်နေပါတယ်...အ၀ိုင်းပတ်ယာဉ်ကလဲ များပဲများလွန်းလှတယ်လို့ ကျမစိတ်ထဲ တွေးနေမိပါတယ်....ဟိုဘက်ခြမ်းမှာရော ကားတန်းက ဘယ်ထိရှည်နေမလဲ နောက်ပြီး အဲ့ဒီကားတန်းက လှည်းတန်းထိများ ပြန်ရောက်နေပြီလား....
လှည်းတန်းမရောက်ခင် နာနတ်တောလမ်း မီးပွိုင့်မှာပဲ ထပ်ပိတ်ဦးမလား.....
ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေကတော့ ချွေးသံရဲရဲ.....နောက်ပြီး ညီထွဋ်သီချင်းလို ရှင်သန်ရဲရဲ....
တရွေ့ရွေ့နဲ့ ကားတန်းက ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းနားထိ ကပ်လာပြီ...
"တောက်...ဘာလို့ဒီလောက်ပိတ်နေရတာလဲ ကွာ "
ရော်.. ဒီလူနဲ့တော့ ခက်နေပါပြီ..ရှေ့နားက ပညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း (TTC) ရှိတယ်လေ
ဒါက ကျမအတွေး...ကလေးတွေ ကျောင်းဆင်းချိန်မို့ထင်ပါရဲ့..
ဒါပေမယ့် စမ်းချောင်း (၂)နားမှာတော့ ပိတ်ဘူးဟ..ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး။
ခဏနေတော့မှ အားလားလား ကျမထင်တာ ဘယ်ဟုတ်ရပါ့လဲ ......
တစ်ဘက်ခြမ်းကနေ ကားမဲမဲ အတန်းလိုက်ကြီး ဖြတ်သွားပါရောလား.....................(ဘာတွေလဲတော့ မသိ)...
မိနစ် ၃၀လောက်အချိန်ကုန်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ကျမလဲ လှည်းတန်းကိုရောက်ပါတော့တယ်...
posted by mirror time 2:53 PM0comments
ဒီညနေ ရန်ကုန်ညနေခင်းက အခါတိုင်းနဲ့ မတူဘူးလို့ ကျမစိတ်ထဲ ထင်နေမိတယ်....ဘာလို့ဆိုတော့ ခါတိုင်းညနေတွေ ဘယ်လိုရှိမယ် ကျမ မတွေးခဲ့ မလေ့လာခဲ့ဘူး।အိပ်နေတာက များပါတယ်॥တကယ်ပြောတာ မယုံမရှိနဲ့॥အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ॥မနက်ပိုင်းလေး တက်စရာရှိတဲ့ ကျုရှင်လေးသွား၊နေ့လည်အတန်းတွေကိုတော့ ပျင်းတာနဲ့ပဲ ဖျက်ထားတာ တော်တော်ကြာပြီ... အင်တာနက်သုံး ...ပြီးတော့အိမ်ပြန်॥အိပ်...ကောင်းလိုက်တဲ့॥တနေ့တာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကွယ်.......(မတူတာက အဲ့လို)
ဒီနေ့တော့မြို့ထဲကို အိမ်ကခိုင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ မြို့ထဲကို ၄၅ ဘတ်စ်စီးပြီးသွားတယ်॥ကျမက ၄၅လိုင်းကို သဘောကျတယ်॥ကျောင်းတက်စဉ်အခါကလဲ တခြားလိုင်းတွေ မစီးဘူး...အထူးသဖြင့် တက္ကသိုလ်တွေကိုသွားတဲ့ လိုင်းတွေဆိုပိုမစီးဘူး....
ဒီတစ်ခါလဲ ခါတိုင်းလိုပဲ ၄၅ကားပေါ်ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တက်မိပါတယ်॥၄၅ ကောက်ရိုးကား (စော်ဘွားကြီးကုန်း-ဆူးလေ)ပေါ်ရောက်သွားတော့ ခုံလွတ်တွေမှ အားကြီးပဲ॥ဒါနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး ထိုင်လိုက်တာပေါ့ ဘယ်ရမလဲ ဒါ မဟာအခွင့်အရေး॥နောက်ပြီး ရတောင့် ရခဲ...အဲ မထိုင်ခင်မှာတောင် ဒီက သေချာရွေးလိုက်သေးတာ... ဘုန်းကြီးခုံလား... အတက်အဆင်းနဲ့ နီးရဲ့လား ၊ နီးလွန်းပြန်လဲ မကောင်းဘူးလေ တော်ကြာ အ၀င်တိုက် အထွက်တိုက်က ဖြစ်ဦးမယ်॥အလယ်မကျ တကျ॥ထွက်ရလဲ လွယ်မယ့်နေရာလေး ရွေးထိုင်ပေါ့...လှည်းတန်းမီးပွိုင့်မှာတင် ကားက တော်တော်ကြာပါတယ်...လူတွေကလဲ မီးပွိုင့်ကနေ တက်လာတာကိုပဲ ကားတစ်စီးလုံးရှိသမျှ ခုံတွေအကုန်လုံးပြည့်... မတ်တပ်တွေလဲ များလာတယ်...
ဒါပေမယ့် မြေနီကုန်းရောက်တော့ လူတွေတော်တော်များများဆင်းသွားကြတယ်........
အဲ့ဒီမှာက ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ မြေနီကုန်းက ခုမှတ်တိုင်ပြောင်းထားတယ်...
အရင်တုန်းက မီးပွိုင့်ကျော်မှ।ခုကျတော့ မီးပွိုင့်မရောက်ခင်မှာ॥မှတ်တိုင်မဟုတ်ဘူးမှတ်လို့ မဆင်းသေးတဲ့လူတွေများမှာလဲ ကားနောက်လိုက်ကအော်တာကို ခံကြရသေးတယ်...ဒီမှာက ဒီလိုပဲ ဘယ်နေ့က ဘာတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့လဲ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး॥
မသိတာသည်... မသိတဲ့သူရဲ့ အပြစ် ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်....
လူတွေကဆင်းသွားကြပြီ॥ထိုင်ခုံတွေလဲ လွတ်တန်သလောက်လွတ်သွားပြီး ....အဲ့ဒီ အချိန်မှာကျမတွေ့ရတာကတော့....လူတစ်ယောက် .... အ၀တ်အစားက သပ်သပ်ရပ်ရပ်....အပေါ်က စပို့ရှပ်အဖြူ।အောက်က စတိုင်ပန် အမဲ နဲ့ ॥တော်တော်လေးသပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိတယ်ဆိုရမယ်।ထိုင်ခုံတစ်ခုကနေ ထလာပြီး...(ဒါပေမယ့်) သူကပိုကောင်းမယ့်ခုံကိုထပ်လိုက်ရှာနေတယ်....ဟိုပြောင်း...ဒီပြောင်း....
မှတ်တိုင်ကတက်လာတဲ့ လူတွေမှာတော့ ဘယ်နေရာထိုင်လို့ ထိုင်ရမယ်မှန်း မသိ...
သူရို့တွေကရော....သူတို့နေရာမရခင်တော့ မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ပေါ့... နောက်တစ်မှတ်တိုင်လောက်နေပြီးလို့ သူတို့နေရာရသွားခဲ့ရင်ရော॥ဒီလိုပဲ....တစ်ခါ ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့ခုံကိုလဲ လက်မလွှတ်ရက်...နောက်ထပ်ကောင်းမယ့် ခုံကိုရှာ..... လုပ်ကြဦးမယ်တူပါတယ်.....
တချို့ဆိုရှိသေးတယ် ကိုယ်ထိုင်ရုံတင်မကဘူး အတူပါလာတဲ့ အမျိုးတွေကိုလဲ လှမ်းခေါ်လိုက်သေး.....
ကျမတွေးမိတယ် ကျမကရော... ဒီလူနဲ့တူတူပဲလား.... လူ့စိတ်ဆိုတာကရော ဒီလိုပဲလား....
ရပြီးသားနေရာတစ်ခုကို မက်မောတွယ်တာရုံတင်မက .....ထပ်ထပ်ပြီးတော့
သူ့နေရာလဲ ပျောက်မှာစိုးတယ်.... သူများကိုလဲ သူနေရာကောင်းမပေးချင်ဘူး...ထပ်ပြီးလဲ ရှာနေသေးတယ်......
posted by mirror time 2:46 PM0comments
အလွမ်းကို တစ်လွှာချင်း အရောင်တင်ဖြစ်တယ်။
posted by mirror time 2:42 PM 1 comment
ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ ကိုယ်တို့တွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှုမှာ ပျော်ပျော်ကြီးစီးဝင်ခဲ့ကြတယ်။
ကိုငှက်၊ကိုညီထွဋ်၊ကိုလေးဖြူ၊နောက်ပြီး ကိုအငဲတို့ရဲ့ သီချင်းတွေကို ပျော်ပျော်ကြီး လိုက်ဆိုညည်းရင်း အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးခဲ့ကြတယ်.
ကိုယ်ထင်ရာ မြင်ရာတွေကို ကြိုက်တဲ့ရှုထောင့်က ကြိုက်သလိုဆွေးနွေး….
တနေကုန် ထိုင်လို့လဲ ရေနွေးအိုးကို ဆောင့်ချပေးတာလောက်က လွဲရင် ကိုယ်တို့အတွက် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ
လူငယ်တွေကလဲ တနေကုန်မအားလပ်နိုင်တဲ့ သင်တန်းပေါင်းစုံနဲ့ ၊သင်တန်းမရှိတဲ့ အခါကျတော့လဲ..ဇိမ်ငြိမ့်ငြိမ့် Air con ခန်းနဲ့ ကဖေးဆိုင်တွေမှာ၊internet cafe တွေမှာ၊computer screen နဲ့ဘဲ စကားပြောကြရင်း အချိန်တွေကုန်ဆုံးကြ..........
ခုံပုပုလေးတွေမှာ ထိုင်ပြီး..သီချင်းသံတစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံသွင်းပြီးနားထောင်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ခုဘယ်မှာမှ မရနိုင်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့
နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကျတော့ သမုဒ်ဓရာ ၀မ်းတစ်ထွာအတွက် နေကုန်နေခမ်းအလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့ လူငယ်လေးတွေ…
သူတို့အတွက်ကတော့ လက်ဘက်ရည်တစ်ခွက်က ထမင်းတစ်နပ်စာလောက် တန်ကြေးရှိတာကိုး…
အလုပ်၊အလုပ် … အလုပ်ပြီးတော့ အလုပ် … ဘာဆိုဘာမှ မသိလိုက်ကြဘူး နေ့ရက်တွေကုန်ဆုံးနေကြရတာ…
လက်ဘက်ရည်ဆိုတာကို ဘယ်သူက စတင်တီထွင်ခဲ့မှန်းမသိပေမယ့် ဗမာပြည်ကိုတော့ တရုတ် နဲ့ ကုလားပြည်ကနေတဆင့်
လက်ဘက်ရည်သောက်သုံးခြင်း အလေ့အထရောက်လာခဲ့တယ်လို့ စာအုပ်တွေမှာဖတ်ဖူးပါတယ်။
ဟိုးအရင်တုန်းက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာဆိုရင်မိန်းကလေးတွေအတွက်မသင့်တော်ဘူးလို့ လူတော်တော်များများက
သက်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ..မိန်းကလေးတွေလည်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့ မဆိုထားနှင့်..ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်ဖို့တောင် မ၀ံ့ရဲခဲ့ကြဘူး...
ဒါပေမယ့်....ကိုယ်တို့ ကံကောင်းတာက ကိုယ်တို့ ကျောင်းတက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီအယူအဆက တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်စ ပြုနေပြီ
ကိုယ်တို့တွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရင်း ဘ၀အမြင်တွေ ပြောင်းခဲ့ကြတယ်…ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြောင်းခဲ့ကြတယ်..
ခြေလှမ်းတွေ မှန်ခဲ့သလို မှားလည်းမှားခဲ့ကြတယ်…
ကိုယ်တို့ခေတ်မှာတော့ ဦးချစ်ဆိုင် တို့ ဘာတို့မှာတော့ ထိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးပေါ့လေ…
ခုတော့ မြန်မာပြည်မှာ လူငယ်တွေလည်း သိပ်မရှိကြတော့ဘူး…အကုန်လုံးနီးပါးက ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လွတ်လပ်သော၊ကြီးပွားတိုးတက်သောနိုင်ငံတွေဆီ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ရောက်ကုန်ကြပြီ..ဗမာပြည်ကတော့ တိုးတက်လာပါတယ်..
ဂီတ၊အနုပညာ၊၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ဓလေ့ထုံးတမ်း…စသဖြင့်ပေါ့လေ..အစစအရာရာ ပြောင်းလဲလို့ နေခဲ့ပြီ....
ဟိုးအရင်က အလေ့အထတွေ တော်တော်များများပျောက်ဆုံးကုန်ပါပြီ။လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေလည်း ဖျော်ဖြေရေးအသွင်ဆောင်လာပြီ..။ တီဗွီနဲ့၊ဒီဗွီဒီ နဲ့ ….သူ့ဘာသာသူတော့ ဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပါပဲ။
“မြန်မာပြည်မှာ လူငယ်တွေမရှိတော့ဘူး…ရှိတဲ့လူငယ်တွေသည်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်….”
မှတ်ချက်။ ။ဒီစာကို ကျမနှင့်လက်ဘက်ရည်ဆိုင် အတူထိုင်ရင်း॥လက်ဘက်ရည်တစ်ခွက်ကို အတူတူမျှသောက်ရင်း..ကျမပြောသမျှစကားတွေကို မညည်းမညူနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
posted by mirror time 2:41 PM0comments
သက်တမ်းရင့် နာမည်ကြီးဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ အကြီးအကဲ journalist တစ်ယောက်နဲ့ စကားတစ်ခါ ပြောဖူးပါတယ်။
ဘာလို့ သူ့ကိုအဲ့လို ညွှန်းရသလဲဆိုတော့ နာမည်ရေးရင် လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းသွားနိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ကျမ မရေးချင်ပါဘူး။
ဆိုပါတော့.. ဗမာပြည်ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ဂျာနယ်က လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ကျမ စကားလက်ဆုံကျဖူးပါတယ်။
ပြောဖြစ်တာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ..ကိုယ့်ထက် ရင့်ကျက်တဲ့ လူတွေနဲ့ဆို စကားပြောရတာ သိပ်ကိုနှစ်ခြိုက်တတ်တဲ့ ကျမအတွက်တော့ မဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုကို ရသလိုမျိုးကို ခံစားရပြီး ကျေလဲကျေနပ်မိပါတယ်..
အတွေ့အကြုံတွေ ပြည့်ဝနေတဲ့ လူကြီးဆိုပေမယ့် ကျမလို ငချွတ်တစ်ယောက်ကို (တချို့စကားတွေမှာ)အရေးတယူထားပြီး နားထောင်ပေးပါတယ်..နားလည်ပေးပုံလဲ ပေါ်ပါတယ်...ကျမဒီလိုပြောတာက အကြောင်းရှိပါတယ်..ဘာလို့ဆိုတော့ လူငယ်ဆိုတာ အနာဂတ်ကိုဖန်တီးတယ် ဆိုတဲ့ စကားအရ ဒီနေ့ ကျမတို့ဆီမှာ ဖြစ်နေတဲ့ မပြေလည်မှုတွေအားလုံးဟာ ကျမတို့ လူငယ်တွေ ညံ့ဖျင်းလို့ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေဟာ တချို့ လူကြီးတွေမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်...ကျမတကယ်ကြုံဖူးပါတယ်
ကြုံရတိုင်းလဲ အောင့်သက်သက်နဲ့ပဲ ငြိမ်နေရတာပါပဲ..
(မနေလို့လဲ ကိုယ်က သူတို့လောက်မှ မသိ၊မတတ်၊နားမလည်သေးတာကိုး)ဟုတ်ဘူးလား...:)
ကျမတို့ စကားဝိုင်းဟာ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအောက်ကနေ ပြည့်သိပ်မွမ်းကျပ်လို့နေပါတော့တယ်...
သူတစ်လှည့်ကိုယ်တစ်လှည့်ပြောကြရင်းက ကျမအတွက်မှတ်သားစရာတွေက မနည်းမနောပါပဲ...
လူကြီးနဲ့ လူငယ်စကားပြောရင် ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်လေ့ရှိသလားတော့ မသိပါဘူး..ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီလူက ချက်ချင်းဆိုသလို ကျမရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ဖြစ်ချင်တာတွေကို ခန့်မှန်းသိရှိသွားတယ်လို့ ကျမတော့ထင်ပါတယ်
ဒါကလဲ သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး ..
စိတ်ထဲရှိသလို စကားကိုပြောတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ခန့်မှန်းရတာ သိပ်ခဲယဉ်းတဲ့ အလုပ်လဲ မဟုတ်တန်ပါဘူးလေ...
လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ခါစကားပြောပြီးတိုင်း ကျမမှာ တွေးစရာတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ရလာတတ်ပါတယ်..
ပြန်တွေးရင်း...သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တာတွေလဲ ရှိသလို..တချို့ သဘောထဲ သိပ်မတွေ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေလဲ ပေါ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်..တစ်ခါတစ်လေဆို လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံ စကားပြောပြီးရင် စိတ်ခံစားချက်တွေများလွန်းလို့ နောက်ထပ်တစ်ခါ ဘယ်တော့မှ စကားလက်ဆုံမကျမိအောင် နေမယ်..
ဆုံလဲ ဘာမှ မပြောမိအောင်နေမယ်..ဒီလိုတွေးထားပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ဖြစ်မလာသေးပါဘူး..နောက်ပြီး ဒါက မကောင်းတဲ့ အလုပ်မှလဲ မဟုတ်တာပဲလေ လို့...တွေးတွေးနေရပါတယ်...
ဒီစာကို ရေးနေရင်းလဲ တွေးမိပါတယ် ဘာမှ မဟုတ်တာကို ငါလျှောက်ရေးနေမိပြန်ပြီလို့..အတွေးတွေက မရှင်းလို့ ငါရေးတာတွေ မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာနေမှာလို့လဲ တွေးမိပါတယ်..
ကျမကို အဲ့ဒီ experienced journalist ကအဲ့ဒီနေ့တုန်းက ပြောတဲ့..ကျမလဲ စိတ်ထဲစွဲနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းက
"မင်း အတွေးရှင်းအောင်နေရမယ် မင်းအတွေးမရှင်းသရွေ့ မင်းရဲ့ အရေးတွေလဲ ရှင်းမှာ မဟုတ်ဘူး" တဲ့။
ကျမခုလေးတင်ပဲ တွေးမိပါတယ် ...တစ်ခါတစ်လေကျတော့ လူကြီးတွေရဲ့ မှတ်ချက်တွေဟာ သိပ်မှန်တတ်ပါလားလို့
ဒိ့အပြင် ကျမအတွက်ဆိုရင်တော့ မှတ်ချက်တွေဟာ အရိပ်တစ်ခုလို ကျမနောက်ကလိုက်နေတတ်တယ်...
posted by mirror time 2:38 PM 1 comment
ကျမ outside world ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေမိတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပါလိမ့်...
ကျမရဲ့ ဆရာကတော့ ခဏခဏပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်..
computer screen နဲ့ပဲ စကားပြောမနေကြပါနဲ့တဲ့
အပြင်လောကမှာ သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ်တွေ ရှိပါတယ်တဲ့..ဘာလို့ သက်ရှိလူသားက သက်မဲ့ကို အရေးတယူလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ သူစဉ်းစားလို့ကိုမရချင်ဘူး တော်ရုံပဲကောင်းပါတယ် တဲ့
ကျမတတ်တဲ့ သင်တန်းမှာက လူငယ်တွေလိုလိုချည်းပါပဲ။ဲ 85 ရာခိုင်နှုန်းက အသက် 20 အောက်တွေ… ဆရာကတော့ သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သူပြောတာပါ ...ကျမကတော့ ကိုယ်လိုရာကိုယ်ဆွဲတွေးပြီး နားလည်လက်ခံခဲ့ပါတယ်..
ကျမကိုယ်တိုင်လဲ ကျမအချိန်တွေကို လက်တွေ့ဘ၀ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ကုန်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ် အလွယ်အသင့် ရတဲ့နေရာတွေမှာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်...ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မယိုင်လဲအောင် ရပ်တည်နေရချိန်မှာ ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်လို့ ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကို အသိသာ ရှိပြီး အမြင်ရှိဖို့ ခဏမေ့ထားရပါတယ်….
အားချိန်ရှိတာနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ပြေးတော့တာပါပဲ... အရင်တုန်းကပျော်စရာနေရာတွေက ခုပျော်စရာမဟုတ်တော့တာလဲ ပါတာပေါ့… ဟိုဟိုဒီဒီလဲ မသွားချင်တော့ပါဘူး။ ကျမသူငယ်ချင်းတွေကလည်းပြောပါတယ် နင်တော့ ဘလောဂ့်ကိုက်နေပြီတဲ့။
ကိုက်နေပြီဆိုတာက စွဲလန်းတာကိုပြောတာပါ (မသိတဲ့လူတွေရှိမှာစိုးလို့ပါ...စကားချပ်)
အင်တာနက်ရှေ့ပဲ ရောက်နေလို့ စာဖတ်ချိန်ကို ညကြီးမင်းကြီးမှအချိန်ယူရပါတယ် ...
စာကတော့ မဖတ်ပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မနေ့က ကျမအရင်အလုပ်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်
အစ်မတွေနဲ့ပြန်ဆုံဖြစ်ပါတယ်..အဲ့ဒီတော့မှ “သြော်..ငါကတော်တော်ပဲ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့
ကင်းကွာနေတာပါရောလို့ …အပြင်လောကကို ရောက်နေတာပါရောလား” လို့တွေးမိပါတယ် ...
အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ online ပေါ်ကဘော်ဒါတွေက တစ်မျိုးထင်နေပါဦးမယ် မဟုတ်ရပါဘူး..
လူစင်စစ်နဲ့ စာလုံးတွေ ကွာခြားချက်ကို လူတိုင်းနားလည်ကြမှာပါ.. မတတ်သာလို့သာ
ဒီ computer ကြီးနဲ့ အဖက်လုပ်စကားပြောနေကြရတာပါ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်လုပ်ချင်ပါ့မလဲ ဒါပေမယ့်တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဒါနဲ့မှ အဖော်ပြုချင်ကြသူတွေလဲ ရှိနေမှာပါ
ကျမ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မရှိတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ဒီလိုပါ မနေ့က သူတို့တွေနဲ့ဆုံတယ် မြောက်ဒဂုံက တစ်ယောက်ရဲ့ ဆေးဆိုင်လေးမှာပါ။
မှတ်တိုင်ကနေ သူ့ဆိုင်ကိုရောက်ဖို့ဆို ခဏပဲကြာပါတယ် ကားပေါ်ကဆင်းပြီး သူ့ဆိုင်ကို အသွားမှာပဲ ကျမအတွက် စိတ်စနောင့်စနင်းဖြစ်စရာ တစ်ခုကြုံပါတယ်
မှတ်တိုင်မှာ ရပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်က ကျမရဲ့ ဘောင်းဘီဘေးအိတ်ကို လက်လှမ်းနှိုက်လိုက်ပါတယ်
ခါးပိုက်နှိုက်တာလည်း မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ် ဘာလို့ဆိုတော့ လူပုံစံက မျက်လုံးတွေက နဲနဲထူးခြားနေပါတယ်.ရဲတင်းမှုတွေ မပါဘူး ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို အထင်းသားမြင်နေရတယ် (ကျမလူကဲခတ်ညံ့ခဲ့ရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေ)
အိတ်ထဲမှာ ဘာမှမပါဘူး i pod ရယ် …ကြိုးတွေရယ်ပဲ ပါပါတယ် သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဘာတွေထင်လို့လဲ မသိပါဘူး… သူ့ကို ကျမချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ နဲနဲလေး တွန့်သွားပြီး တစ်ဖက်ကို လှည့်သွားပါတယ် ကျမသူ့ကို ကြည့်ပြီးတော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်
အ၀တ်အစားကလည်း ဘာဝတ်ထားလို့ထားမှန်းတောင် ခန့်မှန်းလို့ မရပါဘူး ပိန်လိုက်တာမှလဲ လွန်ပါရော.. သူ့ခမျာ သူ့ဘာသာသူ နှိုက်လိုက်တုန်းက နှိုက်ပြီး.. ပြီးမှ ကြောက်နေပုံပါပဲ ပထမတော့ ကျမလဲ နည်းနည်းတော့ လန့်သွားပါတယ်
လန့်ပြီးတော့လည်း အော်လိုက်မိပါသေးတယ် ပြီးမှ သူ့ပုံပန်းကို ကြည့်ပြီး အားနာမိတယ်…
သူဟာ တကယ် ခါးပိုက်နှိုက်ဖြစ်နေဦးတော့ သူ့အနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်တာ သူ့အင်..သူ့အားနဲ့ လုပ်သင့်တဲ့ အချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့ ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ကျမ အတွေးနယ်ချဲ့နေမိတယ် …
ဒီနေ့ ဒီချိန်မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့မှာ အိမ်ထောင်ရှိမယ်. (ကလေးမရှိသေးဘူးလို့ပဲ တွေးကြရအောင်).. အိမ်ထောင်ကလည်း ၀င်ငွေရှိနေခဲ့ရင်တောင် သူ့တစ်ဝမ်းတစ်ခါး အတွက်မလုံလောက်ပါဘူး ဒါကြောင့် သူလုပ်တာကို မှန်တယ်မှားတယ် မဝေဖန်ရဲပေမယ့် သူလုပ်သင့်တယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
ကျမတို့ အတတ်ပညာနဲ့ ဗိုက်ဖြည့်တဲ့သူတွေတောင် လောက်ငပါရဲ့လား…
ဒါပေမယ့် ခက်တာက တောင်မင်းကို မြောက်မင်းမကယ်နိုင်ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့….
(တောင်မင်း မြောက်မင်း ဆိုသည်မှာ လူသာမာန်ကို ဆိုလိုပါသည်။)
ကျမ သူ့ကို စိတ်မဆိုးတော့ပါဘူး….ဆိုးချင်စိတ်လဲ မရှိတော့ပါဘူး
အရင်အလုပ်မှာတုန်းက အညာရွာတွေကို ထောက်ပံ့ရေးအတွက် သွားရရင် ကျမနဲ့ အတူတူခရီးသွားဖက် အစ်ကို တစ်ယောက်ကပြောတာလေးပြန်သတိရမိပါတယ်
ရွာကလူတွေက အင်တာနက်ဆိုတာ အနက်ရောင်လားလို့မေးလိမ့်မယ်..
(ဒါကလည်း ညဘက်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ဗမာဗွီဒီယိုကားထဲက ကြားခဲ့ရတာ…)
အမ်ပီသရီးဆိုတာ3ဂဏန်းနဲ့ ပတ်သတ်တာလား….
ဒီဗွီဒီကို စီဒီစက်လို့ပဲ ခေါ်တတ်တယ်
အသံချဲ့စက်ဆို ဓာတ်စက်လို့ တွင်တွင်ပြောတယ်..
အညာသူ အညာသားရယ်မှ မဟုတ်ရပါ…မြန်မာပြည်မှာ ရှိသမျှလူတွေရဲ့ ထက်ဝက်လောက်က အတူတူပါပဲ.. ဒီလောက်..ရိုးသားတဲ့ မြန်မာတွေရယ်ပါ…
ဘယ် (လူ) ကမှ အကြောင်းမဲ့ သက်သက်လူမသတ်တတ်ပါဘူး …
အော်ကွယ် ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အင်တာနက် စာမျက်နှာများကနေ ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့ တစ်နေ့တာ ကြုံတွေ့ရတာလေးတွေကို ထင်သလိုပြန်ရေးထားတာပါ။
posted by mirror time 2:35 PM0comments
ဒီကဗျာက ကျမလျှောက်ကလိလို့ ပျက်စီးသွားတဲ့ အရင် ပို့စ်တွေထဲက တစ်ခုပါ။
ကျမ သူငယ်ချင်းက ပြောပါတယ်။ "ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပါတဲ့၊ သူများဟာတွေဘဲ ကော်ပီလုပ်နေရင် နင့်ဆီကို ဘယ်သူမှလာလည်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့
ရေးတတ်သလောက်ကိုပဲ ကိုယ်ပိုင်ရေးပါတဲ့ "
သူက ကျမစာရေးဖို့ကို အမြဲအားပေးတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သူပါ။ကျမ ဘလော့ဂ်ကိုတော့ သူလာဖတ် မဖတ်တောင်မသေချာပါဘူး...
အဲ့လိုပြောတဲ့သူ့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်.သူပြောမှဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်းအားပေးပြီး "ငါဟဲ့... ရေးတော့မယ်" ဆိုပြီး အားခဲထားပါတယ်ဆိုမှ ဒီရက်ပိုင်းထဲတော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေရပါတယ်
ဘာရယ်လို့လဲ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာမရှိပါဘူး ရုံးအလုပ်လို မနက်သွား ညနေပြန်..ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရမယ့် ခေတ်အခါပဲလေ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဲ တရားချနေရပါတယ်
နောက်ပြီး ဗမာပြည်က အားလုံးသိတော်မူကြတဲ့ အတိုင်းပဲလေ
သူများတကာဆီမှာ တစ်နာရီနဲ့ ပြီးတတ်တဲ့အလုပ်ကို ဒီမှာက နှစ်နာရီလောက် အချိန်ယူရတတ်တယ်မှုတ်လား။။
နောက်တစ်ခုက ညဘက်ပဲ အားလပ်ချိန်ရှိတဲ့ ကျမအတွက် ညဘက်တွေမှာလဲ တော်တော်အဆင်မပြေပါဘူး
(အိမ်မှာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရလောက်အောင်လဲ မချမ်းသာတော့ အခက်သားလားကွယ် နော...)
အိမ်နဲ့ သိပ်နီးတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကိုပဲ ကျမအတွက် ည9နာရီဆိုရင် သွားရလာရ လုံခြုံမှုမရှိတော့ပါဘူး။
သိတယ်မှုတ်လား ဒီမှာက မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် "အခွင့်အရေး" ဆို ရင်နဲနဲကြီးကျယ်နေဦးမယ်
အရှက်တရားအတွက်တောင် ဘာမှလုံခြုံမှုမရှိပါဘူး(ကျမက သိပ်ကြောက်တတ်တာကြောင့်လဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
ဆိုလိုချင်တာက မအားတာရယ်.အားတော့လဲ အချိန်နဲ့နေရာ သဟဇာတ မဖြစ်တာရယ်..မဆိုသလောက်ကလေးပဲ နှေးတဲ့ အင်တာနင်ဆက်သွယ်ရေးရယ်.. ဒါတွေကြောင့် ကျမရဲ့ အင်မတန်မှ ကြီးမားလှတဲ့ မဟာအစီအစဉ်တစ်ခုကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွေ့ဆိုင်းထားရတယ် လို့ ဆင်ခြေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်
ဒါ့အပြင် ကိုအယ်ဖြူရဲ့ ကဗျာကိုလဲ ဗလာချည်းပဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကျမ ဘလောဂ့်ကို မမြင်ရက်တာနဲ့ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြမိတာဖြစ်ပါတယ်လို့..
အားလပ်တဲ့ အခါကျရင်တော့ ကျမကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုလေးတွေ လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်
posted by mirror time 2:32 PM0comments